Daawo Sawirada Madaxweynaha Somalia oo ka qeyb galay xafladda dhalashada Boqorada UK, khudbadna ka jeediyey shirka hordhaca G-8	| Salaan Media
Daawo Sawirada Madaxweynaha Somalia oo ka qeyb galay xafladda dhalashada Boqorada UK, khudbadna ka jeediyey shirka hordhaca G-8
Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamud ayaa kulan la qaatay Ra’iisul Wasaaraha UK David Cameron, isla markaana ka qeybgalay xafladda dhalashada Boqortooyada UK, isagoo shalay galabna khudbad ka jeediyey shirka hordhaca G-8 oo looga hadlayey arrimaha canshuuraha, ganacsiga xorta ah iyo maamul wanaaga.
Xafladda Boqortooyada ka dib, Madaxweynaha waxaa qado sharaf u sameeyey David Cameron iyo ku-xigeenkiisa. Ka dibna Madaxweynaha iyo madaxda kale ee caalamka waxey ka qeybgaleen shirka hordhaca G8 oo lagu qabtay xarunta Lancaster House ee London oo Madaxweynaha uu halkaas khudbad taariikhi ah ka jeediyey.
Shirkan ayaa looga hadlayey arrimaha Canshuuraha, Ganacsiga, iyo sidii kheyraadka looga ganacsado sida shidaalka loogu heli lahaa hab fur-furan oo kalsooni siin kara shacabka deegaanada kheyraadka leh, oo uu David Cameron oo ah Guddoomiyaha Sanadkan ee G8 uu aad u daneynayo oo go’aanada ka soo baxa shirkan uu la tagi doono shirka Madaxda G8 oo ka dhici doono Waqooyiga Ireland 17ka iyo 18ka June.
Madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku sheegey in Soomaaliya maanta ay dhidibadda u aaseyso haykalkii dowladda oo ku dhisan maamul wanaag iyo in dhaqaalaha dalka loo sameeyey nidaam keeni kara kalsooni oo uu sheegay in shirkan G8-ka uu muhiim u yahay dalalka Soomaaliya oo kale oo ka soo kabanaya collaado una gudbaya nabad iyo horumar.
Madaxwweynaha khudbadiisa waxuu ku sheegey in Soomaaliya ay diyaarisay shuruucdii lagu maamuli lahaa maalgashiga dalka iyo sidii kheyraadka dalka laga soo saaro loogu maamuli lahaa si fur-furan, isagoo uga mahadceliyey David Cameron sida uu caalamka hormuudka uga yahay arrimaha maamul wanaaga iyo horumarka oo Soomaaliyana ay ka faa’iideysan doonto khibradaha dalka UK.